Inona no atao hoe SEO Tsara? Ity misy fanadihadiana tranga | Martech Zone
Inona no atao hoe SEO Tsara? Ity misy fanadihadiana iray
Talata, Aprily 18, 2017 Alarobia, Aprily 19, 2017 Douglas Karr
Nandritra izay taona vitsivitsy lasa izay dia efa tena peo momba ny isan'ny consultant sy masoivoho maro ao amin'ny sehatry ny fikarohana biolojika tsy mety miova. Mampalahelo satria manohy mamela ny làlan'ny mpanjifa izay nanambola be nefa izy ireo rava ny fahafahany mahazo fahefana ara-organika, laharana ary fifamoivoizana.
SEO tsara: fandinihana tranga iray
Ity manaraka ity dia tabilao iray amin'ireo laharam-pahamehan'ny mpanjifa vao haingana teo amin'ny fampiasana fotoana Semrush:
A - Ity no fanombohana ny tranokalan'ny mpanjifa eo ambanin'ny masoivoho teo aloha. Izy io dia sehatra vaovao tsy misy fahefana.
B - Taorian'ny vanim-potoana tsy nitombo, nanapa-kevitra ny maso ivoho fa hanangana paikady efa lany daty amin'ny famoronana sehatra maro, amin'ny alàlan'ny fanamoriana automatique ny olona amina ampaham-pejy misy teny lakile am-polony maro, ary ny fanodinana anaty rohy mahery vaika.
C - Nisondrotra tampoka teo amin'ny laharana sy ny fivezivezena ara-nofo ny tranokala; Na izany aza, tsy niandry ela ny algorithman Google mba hanafoanana ny paikadin'ny backlinking ary hamerina ilay tranokala hiverina amin'ny fahefany teo aloha.
D - Voaroaka ny maso ivoho ary nokaramaina izahay haka ilay tranokala sy ny laharan'ny fikarohana organik. Nandritra ny enim-bolana manaraka, nanamboatra ny tranokala izahay, nanohitra ireo rohy miiba misy poizina, nanitsy ny sehatra rehetra tamin'ny sehatra iray, namily ny pejy marobe teny lakile mankany amin'ny pejy misy lohahevitra tokana, namokatra atiny manankarena, ary infographic. Nanenjika izahay aotraotra backlinking tsy misy fampiroboroboana karama na inona na inona. Tsy misy. Nada.
E - Ny valiny dia mitohy manosika ny fizarana, ny fandraisana andraikitra ary ny fiovam-po. Nandritra ny tampon'ny tsingerina teo anelanelan'ny taona lasa sy tamin'ity taona ity, tafakatra 210% ny fivoriana, niakatra 291% ny mpampiasa, niakatra 165% ny fijerin'ny pejy, nihena 16% ny tahan'ny fihenam-bidy, nihena 32% ny fivoriana vaovao, niakatra 322% ireo mpitsidika niverina . Ity mpanjifa manokana ity dia mampiasa antso an-tariby ho an'ny orinasa, ka tsy manana angon-drakitra fiovam-po marina ivelan'ny fanadihadiana an-tariby izay nanontaniana izy ireo hoe ahoana no nahitana azy ireo. Google dia mitarika hatrany hatrany.
Manohy mampitandrina ireo orinasa mpanakarama mpanadihady fikarohana izay tsy mikaroka na oviana na oviana ny mpijery, ny fifaninanana na ny fihetsik'izy ireo ao amin'ilay tranonkala aho. Ny fanaovana rindran-damina raha tsy misy ny famokarana haino aman-jery nomerika mifandraika, sarobidy ary voadinika tsara dia hahatonga anao hanana olana. Manohy mitondra ny valin'ny vokatra voajanaharin'ireo mpanjifanay izahay amin'ny alàlan'ny nahazo fahefana fa tsy fahefana izay no namboarina na naloany.
Ny fianarana lalina sy ny faharanitan-tsaina artifisialy dia mitohy mitondra ny algorithm Google's Rankbrain. Larry Kim nanamarika:
Google dia hanohy hanara-maso ny pejinao amin'ny fangatahana mifandraika… mandritra ny fotoana fohy. Fa raha tsy mahasarika fampiroboroboana izany dia hitohy ho faty tsy ho ela. Mety hahavery ny 3 isan-jaton'ny fivezivezena isam-bolana izany: kely dia kely ianao ary tsy mahatsikaritra izany raha tsy tara loatra. Amin'ny farany, ny pejinao dia hiala amin'ny fifandirana laharana fotsiny.
Ny paikady fikarohana biolojika ankehitriny dia tsy mitaky mpanadihady fikarohana omaly. Ny paikady fikarohana biolojika ankehitriny dia mitaky mpivarotra marika sy atiny lehibe izay mahatakatra ny fomba hikarohan-tena sy hampifanaraka ny ezaka nomerika amin'ny mpihaino anao avy eo hanomezana azy ireo làlana voavoatra ho amin'ny fiovam-po.
Raha tsy mikaroka mandrakariva ny mpanolo-tsaina mpikaroka momba ny zava-boahary anao, manome ny paikadinao amin'ny paikadin'ny votoatinao, ary manatsara ny tranokalanao, tonga ny fotoana hitadiavana mpiara-miasa fikarohana vaovao. Raha ny marina dia tianay ny manampy - indrindra raha mpanonta be ianao. Ny zavatra niainantsika tany dia tsy manam-paharoa amin'ny indostria.
Tags: ratsy seotsara seofilaharana teny lakilefikarohana biolojikaFikarohana vaovao biolojikafijerena pejy fikarohana voajanaharyfotoam-pikarohana biolojikampampiasa fikarohana voajanaharyambonysemrushinona no tsara seo
Lesona 7 ho an'ny varotra antsinjarany amin'ny vanim-potoanan'ny varotra e-varotra